Shiinaha Cactus Gymnocalycium Mihanovichii var. warshada friedrichii iyo soosaarayaasha | Ubaxa Qoraxdu
Gymnocalycium mihanovichii waa noocyada kubbadda cas ee ugu caansan geedaha kakakus. Xilliga xagaaga, waxay ubaxdo ubaxyo casaan ah, ubaxyo iyo jirridaha dhammaantood waa qurux badan yihiin. Mihanovichii oo la isku qurxiyo ayaa loo isticmaalaa in lagu qurxiyo balakoonnada iyo miisaska, qolka waxaa ka buuxa dhalaal. Waxaa sidoo kale lagu dari karaa succulents kale oo yaryar si loo sameeyo muuqaal ama aragtida dhalada, taas oo waliba ah mid gaar ah.
Cabir: 5.5cm, 8.5cm, 10.5cm
Faahfaahinta Baakadaha: Sanduuqa xumbo / kartoonka / kiiska alwaax
Waqtiga hogaaminta: 20 maalmood ka dib helitaanka deebaajiga
Caadada Kobaca ：
Gymnocalycium mihanovicii waa hiddo-wadaha Cactaceae, oo u dhashay Brazil, muddadiisa koritaankeeduna waa xagaaga.
Heerkulka koritaanka ee habboon waa 20 ~ 25 ℃. Waxay jeceshahay jawi diiran, qalalan oo qorax leh. Waxay u adkeysaneysaa hooska nuska iyo abaarta, ma aha qabow, ka baqaya qoyaan iyo iftiin xoog leh.
Beddel dheriyada: Beddel dheriyada Maajo sanad kasta, badiyaa 3 illaa 5 sano, goobahu waa cirro iyo duqnimo, waxayna u baahan yihiin dib-u-dheelitir kubbadda si ay u cusboonaysiiyaan. Carrada dheriga waa carro isku dhafan oo ah carro-qoyan, carro dhaqameed iyo ciid aad u qalafsan.
Waraabinta: Ku buufi biyaha aagga hal mar 1 ilaa 2 maalmood gudahood inta lagu jiro xilliga koritaanka si ay uga dhigto aagagga mid cusub oo ifaya
Bacriminta: Bacrimiso bishiiba hal mar muddada koritaanka.
Heerkulka khafiifka ah: iftiinka maalinta oo dhan. Markuu iftiinku aad u xoogan yahay, sii hadhka saxda ah duhurkii si looga fogaado gubashada aagga. Xilliga jiilaalka, qorrax badan ayaa loo baahan yahay. Haddii iftiinku uusan ku filnayn, khibradda kubbadda cagta way daciifaysaa.
Hore: Dhirta Succulent Dhirta Cilmiga leh Waxay Nooshahay Qurxinta Guriga
Xiga: Shiinaha Dhirta Cactus Suugaanta Dhirtu Guryaha Dhirta
Shiinaha Dhirta Cactus Suugaanta Dhirtu Guryaha Dhirta
Foostada Dahabka ah ee Cactus Echinocactus Grusonii Hildm